Musharax Cali Xaaji Warsame oo ka hadlay barnaamijkiisa siyaasadeed ee Puntland (Dhegayso) – Radio Daljir
Oktoobar 21, 2013 5:34 b 0
Galkacayo, October 21, 2013 – ?Siddeedda bisha Jannaayo ee sannadka 2014-ka deegaannada Puntland waxaa lagu wadaa in ay ka bilaabato doorashadii madaxtinimada Puntland, taasoo habka codbixinta baarlamaanka ku dhici doonta.
Murashaxiin badan ayaa ku dhawaaqay loolankaasi doorasho in ay ka qaybgali doonaan, kuwaasi oo iskugu jira madaxda xilligaan talada haysa, siyaasiyiin hore, iyo kuwo haatan damacsan in ay ku soo biiraan saaxada siyaasadeed ee Puntland.
Murashaxiinta shaaciyey hankooda m/weynimo doon waxaa ka mid ah Cali Xaaji Warsame, oo dhaw maalmood ka hor ku dhawaaqay in uu u taagan yahay xilka m/weyninada Puntland ee doorashada 2014-ka.
?Radio Daljir ayaa ?la Cali,yeeshay waraysigii koowaad oo uu warbaahinta siiyo kadib markii uu shaaciyey musharraxnimadiisa, waxaana Radio Daljir uu waydiiyey su’aalo badan oo la xiriira taariikhtiisa, barnaamijkiisa siyaasadeed iyo arrimo kale oo badan.
Cabdifitaax Cumar Geeddi ayaa waraystay, waxaana uu marka hore ka warramayaa taariikhdiisii nololeed.